मोदीको नेपाल भ्रमण: राजधानीमा सुरक्षामा कडाई - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मोदीको नेपाल भ्रमण: राजधानीमा सुरक्षामा कडाई
Published On : १२ बैशाख २०७५, बुधबार २०:३६
काठमाडौं: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर सरकारले कडा सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार राजधानी, जनकपुरलगायतका स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन लागिएको हो।
बुधवार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले आफ्ना मातहतका बृत्तलाई काठमाडौंको सुरक्षा कडा बनाउन निर्देशन दिएका छन्। सुरक्षा योजना अनुसार आजैबाट नै राजधानीमा सर्च अप्रेसन शुरु गर्ने भएको छ।
शंकास्पद गतिविधिमा लागेका व्यक्तिको निगरानीदेखि जाँचसमेत गर्न आदेश भएको बिफ्रिङमा सहभागी एक प्रहरी अधिकृतले बताए। उनले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘दिउँसो र राति दुबै समयमा कडा सर्च अभियान र निगरानी गर्ने निर्देशन भएको छ।’